Fiaviany sy fandrosoanyHanova
Fomba sy finoanaHanova
Ny fombafomba (ritoaly) sy ny sorona ao amin' ny fivavahana vedika dia ahitana ny soma (zavapisotro avy amin' ny fakan-javamaniry manokana, inoana fa maha tsy mety maty ny taranaka), ny fivavahana amin' ny afo izay mandray anjara amin' ny fidiovana ara-pivavahana (havir), ny fanaovana sorona soavaly (ashvamedha). Ny fomba fanao amin' ny fandevenana sy amin' ny fandorana faty dia fahita nanomboka tamin' ny vanimpotoana rigvedika. Ny andriamanitra manan-danja indrindra ao amin' ny vedisma dia i Indra sy i Agni ary i Varuna. Ny fiheverana manan-danja indrindra dia ny satya sy ny ṛta.
Fivoarany ho amin' ny brahmanismaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vedisma&oldid=1038138"
Dernière modification le 27 Septambra 2021, à 05:58
Voaova farany tamin'ny 27 Septambra 2021 amin'ny 05:58 ity pejy ity.